सर्लाही कांग्रेसका पूर्वसभापति न्याय माग्दै एक महिनादेखि सानेपामा
'हाम्रो हालत उखु किसानको झैं नहोस्, माग पूरा नभई फर्कन्नौं'
प्रकाशित: सोमबार, पुस २०, २०७७, १५:४७:०० तीर्थराज बस्नेत
काठमाडौं– लक्ष्मण राय कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार निकै दौडधुपमा देखिन्थे। भित्र पदाधिकारी बैठक र त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको थियो।
राय बैठकको निर्णय सुन्न र व्यक्तिगत कामका लागि नेताहरुसँग भेटघाट गर्न त्यहाँ पुगेका थिएनन्। न त उनी समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकार नै हुन्।
राय त टोलीसहित पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग न्याय माग्न पुगेका थिए। सर्लाही कांग्रेसका पूर्वसभापति रायको टोलीले नेताहरुलाई भेट्नेबित्तिकै भन्थ्यो– न्याय पाऊँ।
यसै क्रममा टोलीले सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरुसँग आफ्नो माग राख्यो।
नेताहरूको कार्यकक्षबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस मुख्यालय परिसरमा टोलीका एकजनाले भनिरहेका थिए, ‘हाम्रो अवस्था उखु किसानको झैं नबनोस्।’
उनको भनाइ हालै भुक्तानी माग गर्दै राजधानीमा भएको उखु किसानको आन्दोलनतर्फ लक्षित थियो।
एक महिनासम्म अनुनयविनय गर्दा थकित देखिएका रायको माग पूरा हुन सकेको छैन। यस अवधिमा उनले पार्टीका सबै नेताको दैलो चहारे। हरेक नेताहरुले आश्वासनबाहेक केही नदिएको उनको भनाइ छ।
‘म मंसिर २० देखि काठमाडौंमा छु। जिल्ला सभापतिले मनपरी गर्नुभएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विधि मिचिएको छ। केही साथीहरुलाई झूटो आरोप लगाएर कारबाही गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो माग प्रणालीअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने हो।’
रायको एकल प्रयास सम्भव नभएपछि सर्लाहीबाट अन्य नेतासमेत राजधानी आएका हुन्। करिब २५ जनाको टोली माग लिएर नेताहरूको घरदैलोमा व्यस्त छ।
‘अहिले साथीहरू पनि आउनुभएको छ। सबै आ–आफ्नो हिसाबले बसेका छौं,’ राय भन्छन्, ‘जति समय लागोस् तर माग पूरा नभएसम्म फर्कन्नौं।’
के हो माग?
सर्लाही कांग्रेसका सभापति नागेन्द्रकुमार रायले मनपरी ढंगले पार्टी चाएको आरोप उनीहरुको छ।
पार्टीको भौगोलिक समायोजन हुँदा स्थानीय तहका सभापतिलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफ्ना मान्छेलाई सभापति बनाएको, पार्टीका नेताहरुलाई कारबाही गरेको र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मनलाग्दी गरेको आरोप सभापति रायमाथि छ।
‘सभापतिले मनपरी गरिरहनुभएको छ। भौगोलिक समायोजनका बेलामा बलारा नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका, कौडेना गाँउपालिकाका सभापतिमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफ्ना मान्छेलाई सभापति बनाइयो। समायोजनका बेला अविश्वास राख्नै पाइँदैन,’ उनले सुनाए।
सभापतिले आफ्नै घरमा फर्जी हस्ताक्षर गरेर आफ्ना मान्छेलाई सभापति बनाएको आरोप पूर्वसभापति रायको छ।
सभापति रायको निर्णयविरुद्ध उनको समूहले हस्ताक्षर संकलन गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा बुझाएको थियो।
समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरिदिएको छ। हटाइएका सभापति नै पुनर्स्थापित भएका छन्। तर, सभापति रायले पुनरवलोकन निवेदन हालेर समितिको हेरफेर गरेको पूर्वसभापति रायले सुनाए।
‘सभापतिलाई कायम राखेर समितिमा आफ्ना मान्छे राखेर हेरफेर गरिएको छ। त्यो जिल्ला सभापतिको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन,’ रायले भने, ‘म्याइन्युटमा एकथरी छ। सभापतिले अर्काथरीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। निर्वाचन समितिको निर्णयसमेत उहाँले मानिरहनुभएको छैन। उहाँको यो कदम सच्चिनुपर्छ।’
यस्तै विधि मिचेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको उनको भनाइ छ। क्रियाशील सदस्यता केन्द्रबाट जिल्ला, जिल्लाबाट क्षेत्र, क्षेत्रले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, त्यहाँबाट स्थानीय तह हुँदै वडामा पुग्नुपर्ने हो।
उनले भने, ‘उहाँले विधि मिचेर सीधै वडामा लिए जानुभएको छ। ताकि मनलाग्दी गर्न सकियोस्, आफू अनुकूलका मानिसलाई वितरण गर्न पाइयोस्।’
आफूहरूले विधानमा टेकेर न्यायसंगत ढंगले क्रियाशील वितरण हुनुपर्ने माग राखेको उनले बताए।
अन्य पार्टीबाट आएकाहरुलाई समेत मनलाग्दी क्रियाशील वितरण गरिएको उनको आरोप छ।
‘केन्द्रले अन्तरपार्टी समायोजनमा सहमति नभएको बताउँछ। जिल्लामा मनलाग्दी क्रियाशील बाँडिएको छ। नेताहरुलाई समेत थाहा छैन,’ पूर्वसभापति रायले सुनाए, ‘कुनै केन्द्रीय नेताको निर्देशन र मुख्यसचिवको मिलेमतोमा जिल्ला सभापतिले मनपरी गरेका हुन्।’
सभापति रायले निर्दोष नेताकार्यकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको आरोप उनीहरुको छ।
‘पर्सा गाउँपालिका–४ का वडा सभापति उपेन्द्र राय यादव वडाअध्यक्षको उम्मेदवार थिए। उनलाई अर्कै पार्टीमा लागेको भनेर जिल्ला सभापतिले अनुशासनको कारबाहीका लागि निवेदन पठाउनुभएछ। अनुशासन समितिले कारबाही गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुशासन समितिमा प्रमाण पेस गर्‍यौं। अहिले कारबाही फुकुवा भयो। एक महिनामा एउटा मागचाहिँ पूरा भयो।’
सभापति देउवा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको क्षेत्राधिकारमा विषय भएको बताएर पन्छिएको रायले बताए। उनका अनुसार देउवाले निर्णय भइसकेका माग पार्टीले हेरफेर गर्न नसक्ने जवाफ फर्काएका थिए।
कार्यकर्ताको मानमर्दन गरेर पार्टीले जित्दैन
जिल्ला सभापतिले मनपरी कारबाही र कार्यकर्ताको अपमान गरेको भन्दै राय छन्। कार्यकर्ताको मन दुखाएर पार्टीको भलो नहुने पूर्वसभापति रायको भनाइ छ।
‘अहिले त चुनावको चर्चा पनि छ केरे। कार्यकर्ताको मन दुखाएर पार्टीले कसरी जित्छ? कार्यकताले मनले काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्‍यो। जुन तहको कार्यकर्ता हो, उसलाई त्यहीअनुसारको सम्मान हुनुपर्‍यो। मेरो अनुभवले भन्छ कि कार्यकर्ताले सम्मान चाहेका हुन्छन्। त्यो पार्टीले दिनुपर्छ।’
कार्यकर्ताले सम्मान नपाए पार्टी भोटले नभएर मुखले मात्रै चुनाव जित्ने उनको तर्क छ। कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको र उनीहरुलाई न्याय दिलाउन आफू राजधानी आएको उनको भनाइ छ।
एक महिनादेखि रायको दैनिकी नेताका घर धाउने, माग राख्नेमा बितिरहेको छ। उनका माग पार्टीले पूरा गर्छ वा गर्दैन? गरिहाले कहिले गर्ला? उनी अनभिज्ञ छन्।
तर पनि माग पूरा नगराई सर्लाही नफर्कनेमा उनी अडिग छन्। 'कारबाही फुकवाबाहेक अन्य माग पूरा भएका छैनन्। जति समय लागोस्, माग पूरा नभई सर्लाही फर्कन्नँ,’ उनले भने।
देउवाका दुवै हातमा लड्डु, कुन पहिले खाने ? 'पर्ख र हेर' को स्थितिमा
कांग्रेसका नवप्रवेशी नेताको अनुभव– बल्ल खुलेर बोल्न पाइयो
आन्दोलन र चुनावबारे अनिर्णीत कांग्रेसको महाधिवेशन पनि छायामा
जनताको आवाज सुन्दै छन् नवीन्द्रराज जोशी
संसद् विघटन : सानेपादेखि सडकसम्मै कांग्रेसमा दुई धार